लकडाउनमा श्रीमानले कुटेपछि छोरी सहित घर छाडेँ ! | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
मेरो नाम रिमा तामाङ (परिवर्तित नाम) हो । अहिले म काभ्रेपलान्चोकको नमो बुद्धमा रहेको एकल महिला घरमा बसिरहेकी छु । म यहाँ बसेको एक हप्ता जति भयो होला । मेरो साथमा १० वर्षे छोरी पनि छ ।
मेरो माइतीघर रामेछाप हो । घर भने यहीँ तल भकुण्डेबसीमा पर्छ । मैले पहिलो विवाह गाउँकै एक पुरुषसँग गरेकी थिए । विवाहपछि हामी काठमाडौँ आएर क्षेत्रपाटीको इँटा भट्टामा काम गर्न थाल्यौँ ।
श्रीमानको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो । पहिलो श्रीमानबाट बच्चा जन्मिसकेको थियो । एकल महिला त्यो माथि मजदुरी काम साह्रै दुःख कष्टसँगै मेरो दैनिकी बित्दै थियो । त्यसैले पनि उनको मृत्यु भएको ६ वर्षपछि मैले दोस्रो विवाह भकुण्डेबेसीका पुरुषसँग गरेँ ।
अर्को श्रीमानले मलाई घर (भकुण्डेबेसी) लिएर आए । घर आइसकेपछि परिवारले निको गरेनन् । दिनहुँ जसो गाली, गलौज गर्ने गर्थे ।
तर यो बन्द सुरुभएपछि झन् सबै घरमा नै हुने । त्यसपछि त झन् धेरै कुटपिट गर्न थाले । लकडाउन भएपछि श्रीमानको काम पनि रोकियो । घरमा खाना सकिन थाल्यो । त्यसपछि त परिवारका सबै मान्छे मिलेर मलाई कुट्ने गाली गर्ने गर्न थाले । मलाई देवरको बातसम्म लगाउँथे । राँडी, रण्डी जस्ता शब्द भनेर गाली गर्थे र कुट्थे । मलाई मात्र होइन मेरो सानो छोरीलाई पनि कुट्ने घरमा नबस अर्को बाटो जा भन्ने गर्थे ।
फेरि मेरो विवाह दर्ता पनि भएको छैन । मेरो नागरिकता पनि छैन । अहिले यो बन्दमा अन्त जाने ठाउँ पनि भएन । जे जस्तो भए पनि सहेर नै बसेकी थिएँ । तर मेरो यो दैनिकको दुःख देखेर असह्य भएपछि मलाई छिमेकीहरूले १९ वैशाखमा यो आश्रय घरमा ल्याई पुर्‍याएका हुन् ।
यो एकल महिला घरले म र मेरो छोरीलाई कति दिनसम्म राख्छ भन्ने थाहा छैन । तर अहिले म आश्रय घरमा बसिरहेकी छु ।
यो कथा उहासंग २० वैशाखमा गरिएको कुराकानीमा रहेरे लेखिएको हो ।
काम गर्न नपाउँदा !
६ श्रावण २०७७, मंगलवार ०८:५५